पहाडको विकासमा जटिलता छ, गाउपालिका, नगरपालिकाका प्रमुखहरुले आफ्ना योजना मात्र लाद्न खोजेः वडा अ | KTM Khabar
पहाडको विकासमा जटिलता छ, गाउपालिका, नगरपालिकाका प्रमुखहरुले आफ्ना योजना मात्र लाद्न खोजेः वडा अध्यक्ष नगेन्द्र खत्री
२०७५ पुस १ गते २०:०६ मा प्रकाशित
भोजपुर आफैमा भौगोलिक हिसाबले पाहाडी र विकासको दृष्टीले काम गर्न जटिल जिल्ला हो । स्थानिय चुनाब पछि विकासले सामान्य गति लिएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । तर भनेजस्तो अझै हुन सकेको छैन । यसै पेरिफेरिमा रहेर पहाडि भेगमा विकास निर्माणमा आउने जटिलता र अप्ठ्याराका विषयमा भोजपुर जिल्लाको अरुण गाउपालिका वडा नम्वर १ का वडाअध्यक्ष नगेन्द्र खत्रीसंग केटिएम खबरका लागि रवि भट्टराईले विशेष सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही भिडियो कुराकानीको सम्पादित भिडियो अंशः
भौगोलिक जटिलताले भरिएको पहाडि भेगको विकासको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, के मा ब्यस्त हुनुन्छ ?
जनताको प्रतिनिधि भएपछि जनताकै काममा ब्यस्त छु । स्थानिय चुनाब भएको डेढ बर्ष भयो । विकास निर्माण गर्ने कुरामा भोजपुर पुर्वको कर्णाली भनेर चिनिएको अबस्थामा जनप्रतिधि नभएर कर्मचारीले चलाएको विगतमा विकासका कुनै पनि गतिविधि नभएको कुरालाई हामी आएपछि जगबाट नै निर्माण गर्न सुरुका दिनमा केहि कठिन हुनु स्वभाविक नै हो । तर विकासलाई गति दिने क्रममा सुरुकै दिनमा म साङघातिक आक्रमणमा पनि परे । जनताको प्रतिनिधि भएको हुनाले जनताकै सरोकारको विसयमा काम गर्दै आएको छु ।
तापाईलाई साङ्घातिक आक्रमणमा कसरी पर्नु भयो ?
मैले जुन रुपमा मेरो वडामा जनताका काम गरे । मलाई कहिल्यै लाग्दैन थियो म यस्तो आक्रमणमा पर्छु भनेर । तर विडम्वना आक्रमण मलाई गरियो र महिनौ अस्पताल बस्नु पर्यो । पछि विप्लबका साथीहरुले जिम्मा लिनु भयो तर मेरो विप्लबका साथीहरुसँग कुनै दुष्मनी थिएन तर किन गरियो ?, के कारण गरियो ? भन्न सक्दिन सुनुयोजित तरिकाले हमला भएको सत्य हो ।
पहाड भन्ने वित्तिकै भौगोलीक हिसाबले विकास गर्न जटिल ठाउँ हो, तपाईहरु फिल्डमै उत्रने मान्छे कस्ता समस्याहरु छन ?
समस्याहरु छन् । बाटोको कुरामा भुगोलले कठिन बनाउने कुरा एका तिर छ भने । पाहाडि भेग भएको कारण धेरै समस्याहरु सामाना गर्नु पर्छ । तर यसलाई प्राविधिक रुपमा हामी त्यो जटिलताई चिर्दै काम गरिरहेका छौ । मेरो वडाको कुरा गर्नु हुन्छ भने मैले प्राविधिक रुपमा नै जटिलताहरुलाई चिर्दै कामहरु गरिरहेका छौ । पहिलो कुरा गाउपालिकाहरुमा सहि योजनाहरु बन्न सकेका छैनन । शिक्षा,स्वास्थ्य, सडक लगायतको एकमुष्ट योजना बनाउ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा पहिलेदेखि मैले उठाउदै आएको छु ।
गाऊको विकास, विनाशतर्फ जादैछ पार्टी, पौवा, कुवा मासिदैछन् भन्ने कुरा सुनिन्छ नी ?
मेरो वडामा मात्र हैन । समग्र अरुण गाउपालीकामा यस्तो समस्या देखियो । अघिल्लो बर्षमा केहि समस्या आए । हामीले प्राविधिक ईन्जिनियर राखेको मात्र ६ महिना भयो । त्यो भन्दा अगाडी डोजरकै चालकको भरमा बाटो बनाईयो तर अवबत्यस्तो हुदैन भन्ने लाग्छ ।
तपाईलाई विकास निर्माण गर्ने क्रममा कुन कुन निकायमा असहज महशुस हुन्छ ?
समग्र राष्ट्रिय रुपमै एउटा समस्या छ । म एउटा वडाको अध्यक्ष हुँ । मैलै स्पष्ट रुपमा भन्नै पर्छ । गाउपालिकाका अध्यक्ष ज्यूहरु प्रदेशसंग समस्या पर्यो भन्दै गुनासो गरेको सुनिन्छ तर हामी वडा अध्यक्षहरुलाई सबै भन्दा अप्ठ्यारो गाऊँपालिका र नगरपालिकाको हकमा नगरपालिका महानगरपालिकाको हकमा महानगरपालिकासंग नै समस्या छ ।
यसको मतलब वडाको अध्यक्षले अफ्ना योजना लागु गर्ने हैसियत राख्दैन ?
यस्तो भन्दा पनि गाउपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ज्यूहरुले आफ्नै योजना लाद्न खोज्नु हुन्छ । यसले रिजल्ट राम्रो नआउन सक्छ । अझ अल्पमतमा वडा अध्यक्षहरु हुनुहुन्छ भने त बडो गाह्रो छ ।
अब यसको समाधान के हुन सक्छ ?
समाधान सजिलो छ । हामी वडा अध्यक्षहरुलाई पनि जनताले जनताको सेवाको निमित्त जिताएका हुन । प्रमुख ज्यू र उप प्रमुख ज्यूहरुले बुझिदिनु पर्यो कि हरेक वडाका अध्यक्षहरु आफ्नो वडाको विषयमा विकास गर्न काविल छन भन्ने कुरा । अरुण गाउपालिकाको कुरा गर्दा पनि अध्यक्ष ज्यू ले दम्भ देखाउदै गर्दा पनि हामी उहालाई कन्भिन्स गराउने कुरा गर्छौ । तर समस्या चाँही छ । स्थानिय स्तरमा स्थानिय सरकारसंगै हाम्रो समस्या हो । एउटै पार्टी हुदा केही सामान्य होला तर समस्या छ ।
अन्त्यतमा के भन्नु हुन्छ ?
यो १५ महिनाको क्रममा मैले मेरो वडामा विकासका कामहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छु । र अझै थप गति दिनेछु । जनताले मलाई देखाएको भरोसा र आशालाई मर्न दिने छैन ।
अरुण गाउपालिका वडा नम्वर १ का वडाअध्यक्ष नगेन्द्र खत्रीसंग भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युट्युब लिंकमा जानुहोस्ः
जबर्जस्ती करणी अभियोगमा वृृद्ध पक्राउ
चितवन, २० पुस : पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा १५ वर्षीया किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा रत्ननगर नगरपालिका–११ म ...
टेक्सस कलेजले गर्यो नवआगन्तुक विद्यार्थीहरुको स्वागत एवं बधाई कार्यक्रम (भिडियो)
काठमाडौँ । मित्रपार्कमा रहेको टेक्सस कलेजले बिबिएस, बिबिए र बिएसडब्लुमा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको स्वागत एवं ओरिन्टेशन ...
‘ए’ डिभिजन लिग : बाह्रौँ चरणसम्म अपराजित मनाङ
काठमाडौँ, १८ पुस : जारी शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि जितिसकेको मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबलले लगातार ...
विकास निर्माणले तीव्रता पाउँछः प्रम ओली
काठमाडौँ, १८ पुसः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवा ...